Budata Brick Rage APK maka Android
Budata Brick Rage
Free Budata maka Android (49.00 MB)
Budata Brick Rage,
Brick Rage bụ egwuregwu nke m chere na ị ga-enwe mmasị igwu egwu noge ohere gị iji nwalee echiche gị ma ọ bụrụ na ị bụ onye na-egwu egwuregwu mkpanaka na-eche banyere egwuregwu karịa ihe ngosi. Ị nweghị okomoko nke ịkwụsị na izu ike na egwuregwu ị nwere ike ibudata ma kpọọ nefu na ngwaọrụ gam akporo gị (emebere ka a na-akpọkarị na ekwentị).
Ị ga-adị ngwa ngwa na egwuregwu ebe ị na-enwe ọganihu site nibibi ihe mgbochi na ihe dị naka gị. Enweghị ụzọ isi dụpuo ngọngọ ndị na-ada ngwa ngwa, mana ọ bụrụ na ị kụrụ oghere ndị ahụ, ị ​​​​nwere ohere iji nwayọ. Ị nweghị oge buru ibu iji chọpụta ọdịiche dị netiti ngọngọ na-abịa nusoro wee si ebe ahụ bata. Ihe niile na-eme na sekọnd.
Eziokwu ahụ bụ na blocks anaghị eguzo otu ebe ma nweta akụkụ dị iche iche so na ihe na-eme ka egwuregwu ahụ sie ike. Ọ bụrụ na i bulie isi gị na ihuenyo, ọbụlagodi 1 sekọnd, ị ga-amalite ọzọ.
Brick Rage Ụdịdị
Mmepụta: SuperGames Corp